Hery - Tsiky dia ampy | Novambra 2006
2006-11-18 @ 23:20 in Izaho sy ny ahy
Teo ihany ny faniriako handray anjara amin'ilay Malgachoscopie izay nanentanana ny mpi-blaogy malagasy. Tsy vita anefa izany koa dia miala tsiny ho an'ireo izay sendra nanantena... ary misaotra an'ireo rehetra izay nahavita nanoratra.
Ny tanjona dia ny hilaza ny fomba fahitana ny fiainan'ny Malagasy amin'ny toerana misy azy.
Zavatra roa no nanakana ahy tsy hahavita izany soratra izany. Teo aloha ny olana teknika tao am-piasana araka izay nolazaiko afakomaly ka nahatonga ahy hanohy ny asa rehetra serasera sy ny sisa aty antrano. Atahorana mbola hitohy amin'ny herinandro izany olana izany. Teo ihany koa ny olana ara-potokevitra. Eny, efa azo lazaina ho ela ihany aho no teto Italia saingy tsy hitako hoe inona no azo hamaritana ny fiainan'ny Malagasy eto Italia. Eo koa moa ny tontolo virtoaly izay misy ahy izay mahatonga ahy hanalavitra ny tontolo manodidina... ratsy be izany :-)
Ireto hono ireo namana izay nandray anjara tamin'ity Malgachoscopie ity.
Malagasy Copy par Dadee
Lettre à un Malagasy de Madagascar par Iko
Malgachoscopie | When you give back par Jogany
Malgachoscopie par Lutinewink
Malgachoscopie - Exil + Madagascarianskopia par Lova
Malgachoscopie par Marc
Malagasyscopie par Rajiosy
Malgachoscopie par Tokinao
The Departed... il bene e il male
2006-11-18 @ 23:18 in Sarimihetsika
Zakan'ny synopsis tetsy sy teroa aho izay nilaza fa tena tsara ilay The Departed dia niezaka nijery. Henoko hatramin'ny voalohany fa remake-n'ilay Internal Affairs ilay izy ka izay no nampanahy aho. Rehefa nojerena anefa dia tena nahafa-po tanteraka ny tantara. Ho an'izay tsy tia korontana aloha dia tsy dia tsara ilay izy. Ny votoatin'ny tantara kosa dia azo lazaina hoe voasaina tsara.
Ny lohateny dia nampian'ny italiana hoe Il bene e il male (Ny tsara sy ny ratsy)... izay afaka mamintina tsara ny tian'ny tantara holazaina. Fifamadihan'asa eo amin'ny olona roa. Ny iray jiolahy nanao izay azony natao mba hahatafidirana tanteraka ao anatin'ny polisy... Ny iray kosa polisy izay nampidirina tao anivon'ny andian-jiolahy.
Ny niafarany fotsiny no tsy dia tsara... satria ny nandrasana dia hoe ny handresen'ny tsara. Asa ady sahala no niafaran'ilay izy.